Tozọ iji nyochaa arụmọrụ SEO gị na Semalt
G ISN IS B AN ANYAL NA-EKWU SEO?
NKWU ND FOR NA-EBURU N'AKA EGO
ALH SEOR AN SEOB SEOR SEO SEO NA SEMALT
AKW BKWỌ AKOTKỌ BOT́
Kwa ụbọchị ọtụtụ ndị nwe weebụsaịtị, webmasters, nyocha, na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa dijitalụ na-ekwu okwu iji kwalite ogo nke ma ọ bụ weebụsaịtị nke onye ahịa na nsonaazụ ọchụchọ Google.
Mgbalị ha niile na-emetụta otu oge, SEO . Ifyingmata ma mejuputa mkpa SEO na-enyere ha aka melite ọnọdụ nke weebụsaịtị na SERPs (Search Ngini Ntinye peeji).
Enwere ngwaọrụ dịnụ iji nyochaa arụmọrụ SEO nke weebụsaịtị, mana ịchọta nke ziri ezi abụghị ihe na-erughị iji merie ọkara n'ọgụ ahụ.
Isiokwu a na-enye gị nghọta maka nyocha arụmọrụ SEO yana otu isi nweta ntụkwasị obi, Semalt, nwere ike inyere gị aka imezu ebumnuche SEO gị.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere iji rite uru site na nchịkọta ihe ntanetị nke Semalt, pịa ebe a ma nwee ọ .ụ. Can nwekwara ike ịga n'ihu na-agụ isiokwu ahụ ma mụta banyere ụzọ iji nyochaa arụmọrụ SEO na Semalt.
Gini bu nyocha oru oru SEO?
Nchịkọta arụmọrụ SEO bụ nyocha nlezianya nke saịtị na usoro dị iche iche metụtara SEO. Ọ gụnyere nyochaa weebụsaịtị na ịchọpụta njikarịcha maka ọkwa dị elu na SERPs.
Nchịkọta arụmọrụ SEO na-enyere gị aka ịchọpụta ma atụmatụ SEO gị dị na usoro yana okwu dị, na-emetụta ogo nke saịtị gị, ịkwesịrị ilebara anya.
Mkpa nyocha nyocha arụmọrụ SEO
Nghọta sitere na nyocha arụmọrụ SEO mechara nyere gị aka na ihe ndị a:
Enyemaka iji gbasaa iru gị.
Na-eme ka okporo ụzọ ọzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọ na - enyere weebụsaịtị aka ọfụma na nsonaazụ ọchụchọ.
Ahapụ ka imezu ebumnuche ọkachamara gị ngwa ngwa.
Site na nyocha a, ị na-eme ezigbo echiche na mkpebi siri ike. Oge na ego achọrọ maka imezi ọkwa nke saịtị gị na-ebelata nke ukwuu.
Na enweghị nyocha nyocha arụmọrụ SEO zuru oke, ime mkpebi ọmụma iji melite ogo saịtị dị na nsonaazụ ọchụchọ Google fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume.
Ihe dị mkpa maka ịrụ ọrụ SEO
Ihe ọhụụ emere maka algorithms nke Google lekwasịrị anya na saịtị ndị na-akwụghachi ụgwọ na-egosi mkpa site na ọdịnaya, ọ bụghịkwa iji atụmatụ aghụghọ iji bulie elu.
Onwere otutu okpu ego SEO nyere aka n’inyocha na ichikota webusaiti. Onesfọdụ ndị dị mkpa bụ:
Crawlability nka na ụzụ
Njikọ Ndị Nlekọta Ndị Ọchịchị
Mbipụta Mbipụta Ọdịnaya
Ka anyị ghọta nke ọ bụla n’ime ha:
Weebụsaịtị ọ bụla kwesịrị inye ndị na-achọ weebụ ihe ọmụma ozi ka ha wee nwee ike ịghọta, chọpụta, ma depụta ya na nsonaazụ ọchụchọ. Teknụzụ ndị a na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-agafe agafe, dabere na omume onye nwe weebụ.
Nka na aru oru di iche-iche nke ihe emegoro ime ka anyi mata ihe ochicho ochicho banyere mgbanwe nke saịtị. Ihe atụ nke uzo a bụ ijikọ weebụsaịtị gị na ngwa ọrụ webmaster nke igwe nchọta maka ileba anya na arụmọrụ SEO ya.
Nkuzi ndi mmadu gha eme ihe iji nye ha ihe nchoputa ihe omuma a choro ichoro ibe ntughari. Ihe nlere anya kwesiri bu inye ihe XML nke inyocha ihe nchoputa ka ha ghhota nghota di ichoro itule.
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị enweghị SEO, mbọ niile ị na-etinye na imepụta na imepụta ọdịnaya na-atọ ụtọ bụ ihe na-efu dị ka ebe nchọta ọchụchọ na-atule saịtị gị.
Isi okwu bu okwu ma obu ahịrịokwu ndi mmadu ji acho acho ahia, oru, ma obu ozi site na igwe okwu acho. Ndị na-ebipụta ọdịnaya na ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-achọpụta isiokwu ndị akachasị eji achọ ihe na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha, wee si otú a mepụta ọdịnaya dị mkpa.
Mgbe ichotara isi okwu kasịnụ n’onyinye gị, ọ ga-adị mfe ịmepụta ọdịnaya site na iji ha. N'ihi ya, ebe nrụọrụ weebụ gị ga - adọta ọtụtụ okporo ụzọ.
Rịba ama na ịkwesighi ịuseụbiga ihe ọ ,ụ ,ụ, ma ọ bụ iji okwu mkparị eme ihe n'ihi na mgbe nke a mere, ndị na - achọ ọchụchọ adịghị egbutu oge dị ukwuu na ịta weebụsaịtị.
Ebe nrụọrụ weebụ na-ekwurịta okwu site na ibe weebụ, na ibe weebụ a ga-elekwasị anya na ntinye ọdịnaya (soro ụfọdụ ụkpụrụ na iwu gbasara ọdịnaya) iji bulie ogo na nnweta ọchụchọ nke weebụsaịtị.
Ndenye aha tinye n’ime ya. O kwesiri ịkọwa usoro nke ọdịnaya dị na ibe weebụ ka inyocha enyocha. Gbaa mbọ hụ na aha webusaiti, isi ya na isi okwu ya (H1, H2, H3, H4), edepụtara ya na ihe ndị ọzọ ka edepụtara maka nnabata dị mfe site na nchọta ọchụchọ.
Kwesịrị iji mkpụrụ edemede kwesịrị ekwesị ma dobe njupụta ha na ibe weebụ gị. Kpachapụ anya isi usoro iwu maka vidiyo na onyonyo.
Taa, backlinks dị mkpa n'ihi na ha na-emetụta ogo nke ibe weebụ na ngwa ọchụchọ. Azụghachi azụ bụ naanị websaịtị na-ejikọghachi na webpage.
Ghọta egwuregwu nke backlinks bụ aghụghọ. E nwere ihe abụọ mmadụ kwesịrị ịghọta:
Edebere saịtị niile edepụtara na Google ka enyere aka PageRank dabere ọnụọgụ saịtị na-ejikọ aka na ha.
Azụghachi azụlinks na-abịa n'otu weebụsaịtị nke nwere PageRank dị elu nwere nnukwu ibu karịa ma e jiri ya na azụlinks sitere na narị narị saịtị nwere PageRank dị ala.
Ọ bụrụ na webpage gị enweta backlinks site na weebụsaịtị nke nwere PageRank dị elu, ndị ọrụ ọchụchọ na-amalite ịtụle webpage gị dị ka ihe dị oke egwu, ma si otú a, bulie ya elu.
Usoro mgbasa ozi nke Social Media na-arụ ọrụ nke ọma ma a bịa na ịkekọrịta ọdịnaya. Sharingkekọrịta otu edemede ma ọ bụ faịlụ mgbasa ozi na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta dịka Facebook, Twitter, LinkedIn, na ndị ọzọ pụtara ịmepụta backlinks dị elu na weebụsaịtị.
Dịka ihe niile enwere ike ịkekọrịta na mgbasa ozi ọhaneze site n'aka onye ọ bụla, ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na ịkekọrịta na-eme ka ọwanye ọkwa nke weebụsaịtị. Ọ dị mma, ọ bụghị eziokwu narị pasent 100.
Maka nchọta ọchụchọ, mpempe ihe bara uru ma ọ bụrụ na o nwekwuola ya na ya na itinye aka dị elu. Ọ gụnyere ọnụọgụ nke mmasị, nkwupụta, na ntugharị tweets ma ọ bụ ịkekọrịta ọzọ.
Ọ bụrụ na nke a mere na weebụsaịtị gị, ihe nchọta ga - achọpụta na ọdịnaya dị na ya bara uru ma chịkọbara ekele site na omume. Yabụ, ha ga-enye ya ọkwa dị elu site na okike.
Ngwa inyocha, dị ka Google, na-aza weebụsaịtị ọ bụghị naanị n'ihi nkwenye teknụzụ, isi okwu, ọdịnaya na nkekọrịta mgbasa ozi kamakwa n'ihi ezigbo ahụmịhe nke ndị ọrụ nwere ọdịnaya ibe weebụ.
Ahụmịhe nke onye ọrụ gụnyere imebe weebụsaịtị na itinye ọdịnaya nke ya. Na mgbakwunye na usoro ndị ọzọ, Google na-atụle ebe a na-akpọ oku iji mepụta ihe na websaịtị.
Google nwere ekele ma ọ bụrụ na ihe ndị dị ka mgbasa ozi ma ọ bụ bọtịnụ ịdenye aha ma ọ bụ bọta azụta ga-enweta na-enweghị ịpịgharịa peeji ahụ. Eeh ọ bara uru ọfụma nke weebụsaịtị.
Ọ pụtaghị iji ngalaba a eme ihe (nke dị n'elu ebe a). Dịka ọmụmaatụ, Google na-ata ntaramahụhụ mgbe ọ chọpụtara na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ọtụtụ mgbasa ozi karịa otu anọ.
Ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị inwe ọdịnaya a ga-akọwapụta ma debe ya na ngwa ọchụchọ. Ọ bụrụ na peeji ndị ọzọ nwere ọdịnaya dị na weebụsaịtị, ihe nchọta nwere ọtụtụ ụzọ ọzọ maka ntụnye aka.
Ọ bụ ihe kpatara saịtị saịtị ama ama na ihe ịga nke ọma. Ha na-ebipụta ọtụtụ ọdịnaya mgbe niile na, n'aka nke ya, na-abawanye ọ bụghị naanị ọnụọgụ ndebiri peeji nke kamakwa okporo ụzọ.
Enwekwara blọọgụ ọpụrụiche na-edobe ederede na-enwekarị isiokwu na otu isiokwu. Ndokwa a gwara Google na blọọgụ ndị a ọpụrụiche bara ụba. Yabụ, ọ kachasị elu ha.
Ihe ndị a niile pụtara ugboro ugboro ka ọdịnaya bipụtara bụ ihe dị mkpa. Ọ bụrụ n’ị na-ezigara ọhụụ, na-elezi anya, na ọdịnaya dị mkpa na weebụsaịtị gị, ndị ọrụ ọchụchọ ga-ahụ ya ma melite ogo ya.
Nyochaa arụmọrụ SEO na Semalt
Ijikwa ihe niile dị mkpa SEO adịghị mfe maka mmadụ. Ọ bụ ya mere enwere ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ, dị ka Semalt, nwere ndị ọkachamara iji lekọta ihe dị iche iche SEO.
N'ime ụlọ ọrụ dị ka Semalt , ụfọdụ ndị ọkachamara na-edozi nchịkọta ọdịnaya, ụfọdụ na-ejikwa teknụzụ, ụfọdụ na-elekwasị anya na njikọ azụ, ọ na-aga n'ihu dị ka nke a. Mgbalị niile nke ndị ọkachamara a rụpụtara na-eme ka arụmọrụ SEO dị na weebụsaịtị.
Semalt na-enye ọrụ nyocha ihe ntanetị nke na-abịa:
Na-enyocha ahịa gị
Na-esokwa ọkwa ọkwa gị
Na-enweta ozi zuru oke banyere azụmahịa gị
Semalt na - enyere aka na KPI niile (Ndị na - egosi Ihe Ngosipụta Ọrụ). Offọdụ n'ime ha bụ:
Isi okwu na-atụ aro
Ingsnye ọkwa ndị asọmpi
Nchịkọta weebụsaịtị zuru oke
Okporo ụzọ nchọta anụ ahụ
Mkpesa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
Kedu etu esi enyocha weebụsaịtị si arụ ọrụ?
Nke mbu, ikwesiri ịdebanye aha ya na Semalt ma bido usoro iji nweta data nyocha. Mgbe usoro ahụ mechara, ị ga-enweta ezigbo nkọwa nke nwere:
ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ gị
aha ndị asọmpi gị
nyocha nke weebụsaịtị gị n'ihe gbasara ụkpụrụ ụlọ ọrụ dị na njirisi websaịtị na SEO
I nwekwara ike igbanwe akụkọ a zuru oke na CSV yana ụdị PDF ma budata ya na kọmputa gị. Semalt na-enye ohere iziga ozi nyocha a.
Etu esi amalite?
Malite na nyocha nke weebụsaịtị dị mfe ma bụrụ n'efu. Naanị ịchọrọ ịbanye na ngalaba saịtị ahụ, na n'ime otu nkeji ma ọ bụ abụọ, ị ga-amụta banyere ihe ndị na-egbochi weebụsaịtị gị n'ọkwá dị elu na nsonaazụ ọchụchọ.
Iji tinye saịtị gị na 'nyocha PRO' n'efu, ịnwere ike pịa ebe a ma pịgharịa gaa na ala. Mgbe ịchọtara ya, pịa tinye aha weebụsaịtị gị wee pịa bọtịnụ 'Malite ugbu a'.
Nyochaa arụmọrụ SEO dị oke mkpa maka iwelie ogo ọkwa nke weebụsaịtị na ngwa ọchụchọ. Ọ na - enyere gị aka ịchọpụta ihe kpatara ịmebi weebụsaịtị gị.
Nchịkọta ahụ bụ nzọụkwụ mbụ iji meziwanye arụmọrụ SEO nke saịtị. Ọ na - eme ka ị mata ihe ndị chọrọ mmezi, yabụ rụọ ọrụ na ha.
Agbanyeghị, ụzọ kachasị mma bụ ị nweta ọrụ nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ, dị ka Semalt. Na Semalt, ị nwere ike izu ike n’elu ihe ndina gị ma lelee ebe nrụọrụ weebụ gị na-ewu ewu nke ukwuu.